Xildhibaanadii dhawaan kullanka ku yeeshay Nairobi oo beeniyay inay yihiin dowlad dumis (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanadii dhawaan kullanka ku yeeshay Nairobi oo beeniyay inay yihiin dowlad dumis (SAWIRO)
In ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya islamarkaana dhawaan kullanka ku yeeshay magaalada Nairobi, ayaa sheegay inaysan ahayn mucaarad ka dhan ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo.
Xildhibaanadaas oo dhawaan magaalada Nairobi kaga dhawaaqay madal ay u bixiyeen “Horusocod” ayaa sidoo kale maanta kullan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen inaysan mucaarad aheyn, balse ay doonayaan oo kalliya in la helo isla xisaabtan dhab ah oo wixii wanaagsan lagu taageero dowladda, wixii qalad ahna lagu saxo.
Kullanka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa shir guddoominayay C/rashiid Maxamed Xidig oo hormuud u ah xildhibaanada kullanka ku yeeshay magaalada Nairobi, kuwaas oo la sheegayo inay wadaan mooshin ka dhan ah dowladda madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaanadaasi ayaa kullankooda maanta ku beeniyay warar lagu qoray baraha ay ku xiriirto bulshada iyo qaar ka mid ah website-yadda Soomaalida, kaas oo ahaa inay wadaan mooshin ka dhan ah dowladda uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, xildhibaanadaasi ayaa sheegay in madasha ay kaga dhawaaqeen magaalada Nairobi ay tahay madal la doonayo in looga dhamaado islamarkaana lagu joojiyo qabyaaladda, waxaana ay ku dareen inaysan iyaga ahayn dowlad dumis.
Dhinaca kale, waxay xildhibaanada sheegeen in madashaan ay tahay madal ay leedahay umadda Soomaaliyeed islamarkaana uu ka qeyb geli karo qofkasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah.
Ugu dambeyntii, xildhibaanada ayaa sheegay in hadafka loo dhisay madashaan “Horusocod” ay tahay mid lagu muujiyo oo kaliya dhaliilaha dowladda, iyagoona dhinaca kale iftiimiyay in uljeedadoodu ay tahay in laga gudbo qabyaaladda, loona gudbo hannaanka axsaabta.